गरिब जनताले तिरेको करको रकममा क्रुर भ्रष्टाचार गरेर जीवन सुधार्नेहरु कि सीमामा बसेर एसएसबीको लाती, लाठी र अपमानको भुक्तमान ब्यहोरेर बदलामा अलिकति सहानुभूति पनि नपाउने मधेसका देवनारायणहरु? महाराजको पदवी भिरेर शताब्दीऔंदेखि देशलाई लुटिखानेहरु कि असिमपीडा बेहोरेर बाँचेको सुदुर पहाडको सोझा जनता? लाखौंलाख युवाहरुलाई अरबको खाडीदेखि फोकल्याण्डको टापुसम्म पठाएर, आफ्नो देशको नागरिक विदेशीलाई बेचेर त्यसबापत आएको हण्डी खाएर मोटाउनेहरु ? के तिनै हुन् राष्ट्रवादी? अब आफ्ना आसेपासेहरुलाई मात्र राष्ट्रवादी देख्ने र अरुलाई राष्ट्रघाती देख्न गरिब मानसिकता आजबाटै छाडौं। देश अधिकार माग्ने जनतालाई सत्तोसराप गरेर बलियो हुँदैन। जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाएर, सिंहदरबारमा च्यापिएर बसेको अधिकारलाई जनतासम्म पुर्याउन सकेमात्र देश बलियो हुन्छ। अतः निरीह जनताहरुमाथि रजाइँ गरेर राष्ट्रवादी बनिन्न। जनद्रोही बनिन्छ। सबै नेताहरुलाई चेतना भया। प्रकाशित मिति:
बिहीबार, साउन २०, २०७३ ०९:३५:३३